Otú nyefee Music site na kọmputa na-iPhone na site na iPhone ka Computer
E nwere ndị ka ụfọdụ ndị na-amaghị otú nyefee music site na kọmputa na-iPhone, karịsịa ndị a CD dọwara songs. N'ezie, ọ bụ nnọọ mfe ime ya. N'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ, ike akụkụ bụ ụzọ ọzọ gburugburu: otú nyefee music si iPhone na kọmputa. Ma ị ga-okosobode mbụ nsogbu ma ọ bụ nke abụọ, i nwere ike ịhụ azịza ebe a. Isiokwu a na-agụnye 2 akụkụ:
Part 1. Olee nyefee Music si iPhone ka Computer Part 2. Olee nyefee Music site na kọmputa na-iPhone
Part 1. Olee nyefee Music si iPhone ka Computer
Detuo ha niile songs na listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes Library na kọmputa;
Nyefee niile songs si iPhone na nchekwa na kọmputa gị na a mfe click;
Nyefee họrọ songs si iPhone na kọmputa enweghị ihe ọ bụla hassle;
Dakọtara na Windows 8/7 / Vista / XP, Mac OS X 10,11 / 10,10 / 10,9 / 10,8 / 10,7 / 10,6;
Nzọụkwụ 1 Gbanyụọ akpaka syncing na iTunes
Ẹkedori gị iTunes Library na kọmputa gị. Pịa "Dezie"> "Mmasị ...". Ọhụrụ window, pịa "Devices" taabụ. Na mgbe ahụ ego nhọrọ "Prevent iPods, iPhones, na iPads si syncing na-akpaghị aka." Mgbe, mechie gị iTunes.
Nzọụkwụ 2 Download na wụnye Wondershare TunesGo
Download Wondershare TunesGo. Ma Wondershare TunesGo (Windows) na Wondershare TunesGo (Mac) na nsụgharị ndị dị. Mgbe nbudata, wụnye ya na kọmputa gị. Jiri eriri USB jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na-agba ọsọ Wondershare TunesGo. Gị iPhone ga-apụta dị ka snapshot n'akụkụ aka nri.
Nzọụkwụ 3 Nyefee music si iPhone ka Windows PC ma ọ bụ Mac
Way # 1. Na isi window, ị pụrụ ịhụ nhọrọ "Iji nchekwa". Na ịpị nanị ya, a kwuo igbe ga-arịọ gị ka họrọ otu folda na kọmputa gị iji zọpụta ndị a ịbụ kpọfere songs. Nke a bụ quickest ụzọ nyefee music si iPhone na kọmputa.
Way # 2. Pịa "Media" ịbanye akara panel window maka music. Site n'ebe a, na ị na-enwe ike họrọ chọrọ songs na pịa abịazi nọdụ triangle maka "Export ka". Na ndọpụta ndepụta, họrọ "Mbupụ na My Computer".
Video Tutorial: otú nyefee Music si iPhone ka Computer!
Part 2. Olee nyefee Music site na kọmputa na-iPhone
Ihu ọma, e nwere 2 mfe ụzọ nyefee music site na kọmputa na-iPhone. Lelee ha n'okpuru:
Import Songs ka iPhone enweghị iTunes
Tinye Music site na kọmputa na-iPhone site iTunes
N'ihi na n'aka, iTunes bụ n'elu oke maka ọrụ nyefee songs site na kọmputa na-iPhone. Na o yiri iPhone ọrụ na-agbalị iji iTunes izipu songs ha iPhones na nnọọ begining. Otú ọ dị, ọ na-ejedebeghị na otu kọmputa, nke pụtara na ọ bụrụ na-agbalị nyefee music si ọzọ kọmputa gị iPhone, ị ga-hapụ gị iPhone data. Nke a bụ ihe ndị na-adịghị amasị, n'ihi na ọ bụ otú ike maka ndị na-nwere ihe karịrị otu kọmputa na-enwe music. Ọ bụrụ na ị na-eme a na ụdị ọnọdụ, ị nwere ike nyefee songs site na kọmputa na-iPhone enweghị iTunes, ma Wondershare TunesGo. Lee ndị nzọụkwụ nke otú iji Wondershare TunesGo nyefee music site na kọmputa na-iPhone.
Pịa Download n'okpuru ibudata Wondershare TunesGo na wụnye ya na kọmputa gị. Agba ya na jikọọ na gị iPhone gị na kọmputa site na gị iPhone eriri USB. Na nke abụọ, ị pụrụ ịhụ na gị na iPhone egosi na isi window nke Wondershare TunesGo
Nzọụkwụ 2. Copy Music site na kọmputa na-iPhone
Pịa Media na sidebar. Na mgbe ahụ na Music window, pịa triangle n'okpuru Add iji họrọ Tinye File ma ọ bụ Tinye nchekwa. Ọ bụrụ na ị na-planing ghota somg foto ndị si gị collection gị iPhone, họrọ Tinye File. Mgbe gị niile chọrọ songs bụ ndị a na nchekwa, pịa Tinye nchekwa. Ọzọ, pịa Open nyefee songs gị iPhone. Ọganihu ga-adịru sekọnd ole na ole.
Ọ bụrụ na ị na-agbalị iji iTunes nyefee music site na kọmputa na-iPhone, ị pụrụ ịgbaso nzọụkwụ n'okpuru ịmụta otú ime ya. Tupu ị na-eji iTunes, biko hụ na ị na arụnyere ọhụrụ version. Bụrụ na ọ bụghị, biko ibudata ọhụrụ version nke iTunes na wụnye ya na kọmputa gị.
Ẹkedori iTunes na kọmputa gị. Clic na View menu nke iTunes na họrọ Gosi sidebar si ndọpụta ndepụta. Site n'ime nke a, ị ga-enwe ezi echiche nke gị iTunes Library. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na iPhone eriri USB. Mgbe ejikọrọ ịga nke ọma, gị iPhone ga-apụta n'okpuru Ngwaọrụ na sidebar. Ọ bụrụ na ị na-enwebeghị songs na kọmputa gị ka gị na iTunes n'ọbá akwụkwọ ma, ị kwesịrị ị pịa File menu ma họrọ Tinye ka Library mbubata songs mbụ.
Nzọụkwụ 2. Nyefee Music ka iPhone site iTunes
Pịa gị iPhone n'okpuru NGWAỌRỤ na sidebar. Wee pịa Music taabụ na n'akụkụ aka nri nke window. Ego mmekọrịta Music ma họrọ ma nyefee niile songs ahụ n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ họrọ songs gị iPhone. Pịa Mee ka mepụta ebufe usoro.
Import VCF faịlụ ka iPhone
Mmekọrịta iPhone ka Mac-enweghị a Kwadebe ụgbọ ịnyịnya
Ndabere Music si iPhone ka iTunes
Mmekọrịta Gmail Ndi ana-akpo ka iPhone
Ndabere iPhone Conatcts ka Gmail
Ịgbanwee Data si gam akporo ka iPhone
Bugharịa ọdịnaya site iPhone ka Android
Nyefee na Ndi ana-akpo si HTC ka iPhone
Nyefee SMS si Samsung ka iPhone
> Resource> iPhone> Guide: otú nyefee Music site na kọmputa na-iPhone na site na iPhone ka Computer